Maxaa keenay hoos u dhaca weyn ee ku yimi horumarinta qadiyada Somaliland, sideese diblomasiyeenteenu u dhaqantaa. | Somaliland.Org
January 28, 2009	Maxaa keenay hoos u dhaca weyn ee ku yimi horumarinta qadiyada Somaliland, sideese diblomasiyeenteenu u dhaqantaa.
Sannadkii hore markuu madaxweynuhu booqday carriga Maraykanka waxaa Cawil joogey Kenya mudo bil iyo badh ku dhow iyadoo ay dawladu shaacisay inuu ku maqanyahay shaqo dawladeed. Waxay kaloo lawada ogyahay in koox budh cad ahi ay lug ka jebiyeen wasiiraka isagoo ka shaqaynaya qadiyada Somaliland (go figure). Safarkaa kii xigey wuxu hadana Cawil u baxay Jabuti, iyadoo dawladu sheegtay inuu kala soo xaajoodey arrimo ay dawladu ku sifaysay xidhiidhka labada waddan. Waxay taasi inoo cadaynaysaa in Wasaarada arrimaha dibada hawsheedii ay tahay mid in labada wasiir u dhexaysa oo aan ku magacawnayn wariir gaara.…, or so it seems. Waxaa ilo xog ogaala cadeeyeen in Cawil ku fara dhuudhuuban yahay arrimaha dibeda wixii Somali weyn khuseeya aan marnaba Cabdulahi Yare salageeda soo mari karin. Hadii ay dad badan amankaag iyo fajac ku noqotay in Kenya oo haatan haysa madaxnimada IGAD aan looga ololayn ama aan lagala hadal qadiyada Somaliland tan iyo waqtigii Adna Adan ay ahayd wasiirka arrimaha dibada, waxaan u sababaynayaa in Cawil ku cindanaa oo uu u dhexeeyey Riyaale iyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Kornayl C/laahi Yusuf. Arrinta uu Cawil Kenay utegey Janaayo 08 ay ahayd mid aan Somaliland khusayn. Waxa arrinkani tusayaa in dawladaha dibadu ay kala garan waayaan cida si cad u metasha Somaliland arrimaheeda dibeda
· Anshax la’aan iyo asluub xumo loo isticmaalay safarada dibeda (luck of etiquette and professionalism within Somaliland or other entities) Aduunku waxa ka jira “protocols” luqad iyo qaab dhaqameed dupmalisiyadeed oo dawladuhu u wada dhaqmaan. Dawlad kastaa waxay leedahay xafiis ka shaqeeya hab dhaqankeeda diblomaasiyadeed (protocol office). Xafiiskani wuxuu qaabilsanyahay inuu hubiyo habsami u dhaqanka diblomaasiyada gudo iyo dibedba. Waxaa kaloo jira etiquette ama anshaxyo fara badan, sida qaab fadhiga, “posture”, hadalka “speech”, cunnada “eating etiquette” iyo kuwa kale. Waxa safarkii Riyale ku tegey America kal hore ka soo if baxay xogo farabadan oo aan hore looga war hayn. Anigoo xogahaa mid mid u qaadi doona bal horta aan ku horayno hadlka diblomaasiyadeed ee dawlada Riyale:
· Waad kawada dheregsantihiin shirkii uu wasiirka arrimaha dibadu (xasfiiska ugu sareeya ee diblomaasiyada Somaliland) siiyey saxaafada maxaliga ah Hargeysa, January 26keedii inuu u isticmaalay luqad ceeb ku ah offiska uu metalayo iyo shaqsiyadiisaba. Wuxu wasiirku yidhi “duqu magacayga ayuu ku walacay”isagoo u jeeda Xoghayaha xisbiga KULMIYE Axmed Silanyo. Bilaahi calykum, hadii Xoghayuhu bidhaamiyey goldaloolada dawlada, iyo in saluug ku jiro xukuumada Riyaale, cayda iyo aflagaada maxaa meesha keenay? Qof miyir la’ ama drunkard xitaa luqadan ma isticmaalo….Ragu miyuu wallacaa? Waa sheekadii la odhan jirey nin reer Jibuti ah ayaa isku dooxay!
Qaab Fadhiga (Posture):
· Posture-ka ama qaab fadhiyeedka diblomaasiyiinteenu waa muhiim, bal yar milicso sawirka madaxweynaha Somaliland oo la fadhiya Jendayi Fraizer.
Figure 1 (President Riayle and Jendayi Frazer - former US under Secretary)
President Riyale with UK ambassador for Ethiopia, Mr Norman Ling
· Madaxweynaha lugihiisu way kala fogyihiin “wuu is kala hayaa”, sidii isagoo afadiisii hor fadhiya. Halka Jedayi ay u fadhido qaab diplomsiyadeed. Fadhigani wuxu dirayaa fariin ah: “Rude and impolite” Madaxweynuhu waan hubaa inaanu taa u jeedin, laakiin qofka reer galbeedka ahi siduu wax u arkaa?
Cuntada (eating etiquette)
· Waxaa iyana dhacday in “working lunch” loogu sameeyey madaxweynaha iyo wefidgiisii state department-ka. Qada sharaftaa waxaa ka dhacday dhacdooyin dhawra oo kala ah:
o In wufuudii Somaliland nin ka mid ahi “lama sheegayo” ku duufsadey masarkii in afka la iska mariyo loogu talo galay. (tissue). Waxaa mudalabkii far iyo suul kaga qaaday masarkii miiska, isagoo soo dhigay mid kale oo laalaaban. Bal ka waran diblomaasi ku siinsaday, ama sanka farta iskaga geliyey meeshii lagu cuntaynayey? YAK.
o Waxaa kaloo dhacday in nin kalena uu leefay mindiyhii cuntada. This is no, no.
o Waxaa kaloo iyana jirta oo aad sawirka kuwada aragteen in Marwada madaxweynuhu ay badhtanka u fadhido oo ay ka soo qayb gashay shirkan qado.. (iyadoo u fooshadaydsan sidii ilma Muse Matan). Waxa igu maqala ah in Marwadu shirarka intooda badan ay ka qaybgasho. Beynow marwadu afafka qalaad ma taqaan?… Working Lunch waxay ahayd in diplomats uun ay ka qayb galaan, maaha cidkast oo Madaxweynaha la socotey. (Not everyone that came with the president.)
· Madaxweynuhu isagoo aan wadan international lowyer iyo cid ka caawisa qawaaniinta adduunka ayuu hor tegey rag ka shaqaynayey US State Department qaybta Afrikada bari in ka badan 40 sanadood “Ka hor intaan Alla ha u naxariistee Cigaal la kulmin Lindon Johnson 1960s.” Saraakiishaa ka shaqaysa US State Department iyagaa ka yaqaana Africa iyo xaaladeheeda cid kasta, una haysta takhasus oo wax kalba eegin. Qadada intii lagu jirey, meesha ilaa raashin looma keenine, waxay u yimaadeen briefing ama inay ka hadlaan danta Somaliland iyo qadiyadeeda. Waxa wufuudeenu waqtigii ku dhameeyeen sheeko aan loo baahnayn….ilaa tii Afweyne iyo …inaynu Somaliya nahay laba wadan oo midoobey lixdankii iyo sheeko aan qadiyada Somaliland waxba ugu jilayn. Ragan ay hor tageen waa rag aan wax kaleba baran. Ilaa Riyaale iyo caruurtiisa iyo isagu qofkuu yahay bay hayaan. Waad ogaydeen in CIA-du ay sii daayeen faylkii Cigaal (alaa yarxam) markuu dhintay.
3. UDUB oo had iyo gooraale ku foogan mucaaridka gaar ahaan KULMIYE (lost of focus)
Waxaynu kawada dheresanahay sida xukuumada Riyaale ay had iyo gooraale ugu hawlantahay la dagaalanka xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE. Waxaa liiska koowaad ee ahmiyada dawlada haatan ku jira, KULMIYE, ahmiyada labaadna KULMIYE ahmiyada sadexaadna, (waad garatay) KULMIYE ama sidii loo baajin lahaa tartan lala galo KULMIYE, ama loogu dhigi lahaa doorashada madaxweynanimada ee sanadkan 2009. Waxay dawladu caadaysatey inay xadhig sharci darro ah iyo caga juglayn joogta ah ay ku hayso KULMIYE. Waxaa halkaa ku lumay ahmiyadihii waaweynaa ee kale sida horumarinta qadiyada Somaliland, ilaalinta nabadgelyada, iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Waynu ognahay qarixii ka dhacay madaxtooyada sandkii la soo dhaafay oo dawladu ku hamabertey sida fudud ee madaxtooyada gawaadhi loola soo galay. Waxa focuskii dawladnimo noqday mid KULMIYE uun la iskaga eego.
Waxa Somaliland soo maray fursado aad qaali u ahaa oo shacabku u arko in aan laga faaiidaysan. Aan ku kusoo koobo labada ugu muhiimsane waxay kala yihiin 1. Midowga Africa iyo America. Iyo 2. Americas.
Aan ku horeeye Midwoga Africa oo aynu maqlay inay qadiyada Somaliland soo hor dhigi doonaan kal fadhigoodii Ethiopa lagu qabtay sanadkii 2007. Juuq dambe lagama hayo halka xaal ku dambeeyey.
2. Xoghayahii hore ee USA uqaabilsanaa arrimaha Africa, jendayi frazer, ayaa booqasho ku timi waddanka sanadkii lasoo dhaafay horaantiisii (March). Jendayi waxay ka jawaabaysey booqashadii uu Madaxweynahu ku tegey cariga Maraykanka January 2008. Maxay ku dhacday in cid kasta oo aynu la xidhiidhnaa ay unoqotaa “Mute Point” ama “Juuqla”? Maye saxiixyadii dawladu inoo sheegtay ee ay la gashay USAID? Mise waxa la inoo sheegayo, sidii dhismihii warshadii sibidhka ee Berbera ayay ahayd wax kama jiraan? Arrintu si kastaba ahaatee waxa cad in la dawladaha shisheeye ay arkaan “incompetence” ama tayadarada iyo aqoon la’aanta haysata dawlada Riyaale, aanayna doonayn inay la deal-gareeyaan. Yaa isku halayn kara ragaan ama mindida leefaya ama sanka farta iska gelinaya ama duufka iskaga siinsanaya tissuga afka loogu talagalay.
Ta kale ee xusida mudani waxa weeye, maxaa ku dhacay saaxiibadii aynu lahayn ee had iyo gooraaale inooga ololayn jirey USA dhexdeeda sida, Peter Pham iyo Iqbal, iwm: Goorma ayaa kuugu dambaysey labadan nin oo ka hadlaya Somaliland? Maxaa aamusiyey?
4. Qalaanqal iyo hirdin siyaasadeed oo ka dhex aloosan hogaanka iyo talada UDUB (chaos within the UDUB leadership)
Aan ku bilawnee, waa sidee xaalka UDUB? Saamayn intee le’eg ayuu ku leeyahay hirdinka siyaasadeed ee UDUB horumarinta qadiyada Somaliland? UDUB waxay ku jirtaa waqti aad u madow. Waxaa gorda iskula jira inta la ogyahay sadex kooxood oo jiq isku ah. Koox uu wato Riyaale oo ay ka midyihiin labada wasiir ee Somaliland. Koox uu wato Cabdulaahi Darawal iyo koox labada kooxoodba ay fool eryayaan oo hadba qolada ay la joogaan u dhoola cadeeya. Waxaa mudoba la isku hayey sidii shirkii xisbiga loo qaban lahaa iyo cida u carari doonta jagada Madaxwenanimadu (haday dhacdo). Waxayse talo fara ka haadey markii uu xijaabtey Ala ha u naxariistee Maxamed Ismaaciil Bulaale, Xoghayihii xibiga UDUB. Marxuunku wuxu ku baneeyey Riyaale kooxdiisa furin dagaal oo aan laga sii tabaabulshaysan.
Waxa hidrinkan siyaasadeed sababay in aanay dawladu ahmiyad buuxda siin horumarinta qadiyada Somaliland, kaabayaasha dhaqaalaha ama dhisida institutions-ka muhimka ah.